Afrika iyo COVID-19 dagalki lagula jiray. Cusbooneysiinta qaar ka mid ah qaaradda. - Amjambo Africa
Afrika iyo COVID-19 dagalki lagula jiray. Cusbooneysiinta qaar ka mid ah qaaradda.
Dalal badan oo Afrikaan ah ayaa sheegaya tiro yar ama hoos u dhacaya tirada kiisaska. Kuwaas waxaa ka mid ah Rwanda iyo Kenya, iyadoo RWandan New Times ay soo warinayan in dib loo furey duullimaadyadii ganacsiga ee 1-da Agoosto iyo Kenya Airways of iyoduna bilaabeyso inay dib u bilawdo duulimaadyadii maxalliga ahaa July 15-keedii. Tunisiya oo ay ku tiirsan Dalxiis aya iyoduna furi doonta xuduudeeda 27-ka July sida dalku u arko COVID- 19 kiis tira hoos u dhictanka. Tirooyinka kiisaska ee Algeria, Tuniisiya, Morocco, iyo Rwanda ayaa aad u hooseeya oo Midowga Yurub wuxuu ku dhawaaqay qaadashada safarka ee tartiib-tartiib ah.
Maamulka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo oo cudurka Ebola ku soo qaatay tusaale, tusayana wadamada kale laga yaabo inay rabaan inay ku daydaan la dagaalitanka cudurka loo yaqano COVID-19. Bsha Juun 25 ee qormada fikirka ah oo uu soo saaray Madaxa Ururka Caafimaadka Aduunka Dr Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus ee kaaliyaha. Cinwaan looga dhigay “Fayrasyadu ma qaataan biririf. Dunidu waxay wax ka baran kartaa sida ay DRC u garaacayso Ebola, ”Dr Tedros ayaa qoray in sababta oo ah dadka reer Kongo ay aaminsan yihiin sayniska, bulshada, xogta, iyo iskaashiga hay’adaha caalamiga ah,
Dhawaan madaxweynaha loo dhaariyay Burundi ( Evariste Ndayishimiye) ayaa bilaabay barnaamijka “Kama qaadin cudurka mana faafin doono COVID-19” sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Tani waxay si aad ah uga duwan tahay kuwii ka horreeyay, kaasoo hoos u dhigay masiibada ilaa dhimashadiisii ugu dambaysay, sida la sheegay ka yimid COVID-19. Qaxooti badan iyo magangalyo-doon ka soo jeeda Burundi ayaa ku nool Maine. Waxay ka murugoodeen dhowr dil oo COVID-19 ah oo ka dhacay Burundi, sidaa darteed wararka sheegaya in madaxweynaha cusub uu qaadanayo cudurka faafa si dhab ah ayaa loo soo dhoweynaya. Wuxu faray kuna qaybidona in la xidho wajiga.
Wadamada ku yaal qaarada Afrika ayaa si wada jir ah isugu abaabulaya sidii ay ugudbi lahaayeen dariiqa looga gudbo dhibaatada dhaqaale ee sababay masiibada. Global Citizen ayaa soo warinaysa in hoggaamiyeyaasha Galbeedka Afrika ay ku yabooheen $ 25 milyan. dhinaca jawaabta gobolka ee COVID-19, oo loogu talagalay in lagu taageero waxbarashada, daryeelka caafimaadka, iyo marin u helka fayadhowrka, oo ka mid ah dadaallada kale ee Bulshada Dhaqaalaha Galbeedka Afrika-ECOWAS.
PreviousWorking together against racist policies
NextSoomaaliya waxay dib ugu noqotay saliida iyo gaaska